Misambotra ireo mpitarika mpikatroka maro tsy tia fampodiana-fandroahana tsy misy toy izany ny polisin’i Hong Kong · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Septambra 2019 14:11 GMT
Nosamborina tamin'ny 30 aogositra i Joshua Wong sy i Agnes Chow avy ao amin'ny Demosisto. Saripikan'i The Stand News. Nahazoana alalana.
Koa satria moa efa vonona hankalaza fotoan-dehibe ny Repoblika Entim-Bahoakan'i Shina, ny faha-70 taona nanorenana azy amin'ny 1 oktobra ho avy izao, dia mihamavesatra ny tsindry ara-politika hamerenana ny filaminana ao Hong Kong. Hiadiana amin'izany tokotanin-sehatra (mikorontana) izany, dia nanova paikady ny governemantan'i Hong Kong ka rehefa nataony ny paikady famoretana hihazona ireo mpanao fihetsiketsehana eny amin'ny toerana anaovana fihetsiketsehana dia ny fisamborana tambajotra-mpikatroka pro-demaokrasia maromaro sy ireo mpitarika indray no ataony.
Tamin'ny 29 aogositra, nohazonina nandritra ny alina raha handeha handray sidina ho Japana i Andy Chan, mpitarika ny antoko mpitaky fahaleovantena voarara Antoko Nasionaly Hong Kong. Nilaza tamin'ny gazety ny polisy fa nosamborina noho ny ahiahy nanakorontana sy nanafika polisy manamboninahitra i Chan.
Tamin'ny 30 aogositra, mpianatra sady mpikatroka pro-demokrasia Joshua Wong sy Agnes Chow avy ao amin'ny Demosisto no nosamborina sy nohazonina ho nandrisika, nanomana ary nandray anjara fivoriana tsy nahazoana alalana teo ivelan'ny foiben'ny polisy tao Wan Chai tamin'ny 21 jona.
Natosika nankao amin'ny fiaran'olon-tsotra iray i Wong teny an-dalana ho ao amin'ny garan'ny lalana ambanin'ny tany tamin'ny fito ora sy sasany maraina ary nambenana ho any amin'ny foiben'ny polisy ao Wan Chai any afovoan-tanànan'i Hong Kong. Nosamborina tao an-tranony tao Tai Po kosa indray i Chow. Samy noafahana tamin'ny fandoavana onitra solofonja avokoa izy mianadahy ireto, saingy tsy mahazo mivoaka ny trano manomboka amin'ny 11 ora alina ka hatramin'ny 7 ora maraina ary manatona ny polisy indroa isa-kerinandro.
Nampangaina ho nandrisika hanao fivoriana tsy nahazoana alalana ihany koa i Ivan Lam filohan'ny Demosisto. Fa efa tany ivelan'i Hong Kong i Yet Lam hatramin'ny 28 aogositra.
Nosamborina tamin'ny 30 aogositra noahiahiana ho niray tsikombakomba amin'ny fanimbana na fanapotehana fananana araka ny lalànan-keloka bevava, sy tamin'ny “fidirana sy ny fitoerana tao amin'ny faritry ny Lapa(n'ny antenimiera) araka ny lalànan'ny vaomieran'ny fanaovan-dalàna (Fahefana sy tombondahiny) tamin'ny voalohany jolay i Althea Suen, filohan'ny sendikan'ny mpianatra teo aloha tao amin'ny Oniversiten'i Hong Kong.
Tafiditra tao anatin'ny lisitry ny hosamborina tamin'ny 30 aogositra ihany koa ny mpanolotsainan'ny distrikan'i Sha Tin Rick Hui Yi-yu sy ny mpanao lalàna Cheng Chung-tai.
Mbola tamin'ny 29 aogositra ihany koa, mpanomana fihetsiketsehana anankiroa no notafihan'olona izay azo heverina fa avy amin'ny triadin'i Hong Kong. Notafihan'olona roa misarontava tamin'ny antsy sy kibain'ny baseball i Jimmy Sham, mpampivory ao amin'ny Civic Human Rights Front (CHRF na Manda Sivikan'ny Zon'Olombelona), fikambanana fototra iray ao anatin'ny fanentanana fanoherana ny fandroahana-fampodiana. Raha tafandositra tamin'ity fanafihana tampoka ity i Sham, tsy afa-bela kosa ny namany izay voadaroka kibay imbetsaka ary nampidirina hopitaly.
Talohan'ny fanafihana, olona ampolony maro no nanomana fihetsiketsehana teo ivelan'ny biraon'ny mpikambana iray ao amin'ny CHRF amin'ny fidiran'ny fikambanana an-tsehatra ao amin'ny fihetsiketseham-panoherana. Nifamaly am-bava tamin'ireo i Sham.
Notafihan-dehilahy efatra tamin'ny rojovy sy elo ihany koa i Chung Kin Ping, ilay nangataka ny diaben'ny Yuen Long tamin'ny 27 jolay, tokotokony ho tamin'ny 4 ora folakandron'ny 29 aogositra. Nampidirina hopitaly i Chung noho izany.
Tsy nampihemotra ireo mpanao fihetsiketsehana tsy hanao hetsika fanelingelenana ny famoretana sy ny fisamboran'ny polisy teo aloha. Efa saika ho isan'andro no misy hetsika sy fivoriana kelikely any amin'ireo distrika maro. Matetika dia matetika ny fivoriana milamina no mifarana amin'ny fifandonana amin'ny polisy. Efa hatramin'ny 12 jona ny baomba mandatsa-dranomaso, bala fingotra ary ny haron-tsaramaso no hita hatrany amin'ny diabe mpitranga isaky ny faran'ny herinandro.
Nangataka ny fahazoan-dalan'ny polisy ny CHRF hanatontosa famoriam-bahoaka (t)amin'ny 31 aogositra mitaky ny hanafoanana ny fifidianana lasitry ny NPC, ilay fanafoanana tanteraka ny volavolan-dalànan'ny fampodiana-fandroahana, ary mitaky famotorana mahaleotena tamin'izay nitranga tamin'ny fanoherana ny fampodiana-fandroahana. Maro ny mpanao fihetsiketsehana mitovy hevitra amin-dry zareo amin'izany fitakiana izany.
Fa efa notsipahan'ny polisy ny fangatahana tamin'ny 28 aogositra. Midika izany fa tsy ara-dalàna ny fivoriana ary hiafara amin'ny fifandonana sy korontana manerana ny tanàna ny fivoriana, satria manana fahefana hisambotra na iza na iza miseho ao amin'ny fihetsiketsehana ny polisy.
Tolokevitra hamelomana ny fitsipika amin'ny fotoanan'ny hotakotaka
Raha tsy manana vondrona ara-politika ikambanany ny ankamaroan'ireo mpanao fihetsiketsehana voasambotra, mino ny governemantan'i Beijing sy Hong Kong fa misy hery sy vondrona ara-politika anatiny sy vahiny ao ambadik'izao fihetsiketsehana anti-governemanta izao. Ohatra, taorian'ny fihetsiketsehana rojon'olombelona tamin'ny “Lalan'i Hong Kong” tamin'ny 24 aogositra, tsikerain'ny antoko mpitondratenin'i Beijing ilay hetsika saimbôlika ho “lalana feno poizin'ny fahaleovantenan'i Hong Kong” ka takiany ny hanaovana famoretana amin'ny hery mpanohana ny fahaleovantena.
Telo andro taty aoriana, tamin'ny 27 aogositra, nilaza ny Lehiben'ny Mpanatanteraka Carrie Lam, izay efa nilaza tany aloha fa te-hamaha ny olana politika amin'ny alalan'ny fifampiresahana, fa tsy afaka ny hanaiky ny fitakian'ny mpanao fihetsiketsehana ary mety hoheveriny ny fahafahana mamelona fitsipika amin'ny fotoanan'ny hotakotaka. Izany lalàna izany no hanome fahefana ny governemanta sy ny manampahefanan'ny polisy hisambotra izay ahiahiana, hanitatra ny fotoam-pihazonana, hanaramaso ny fitaterana, haka sy hikaroka fananan'olon-tsotra, hametraka ny sivana, ary hanapaka ny fifandraisana ka tafiditra amin'izany ny fanakanana ny tranonkala ankilan'ireo fepetra hafa.
Efa niadian-kevitra tao amin'ireo manampahefana ambony ao amin'ny governemanta izany tolokevitra izany ho fiomanana amin'ny hetsika faobe izay hotanterahana amin'ny 31 aogositra, izay manamarika ny fahadimy taona nanapahan'ny komity mpanomana ny Kongresim-bahoaka Nasionaly hametraka fombafombam-politika manasivana ny kandidà hofidiam-bahoaka ho Lehiben'ny mpanatanteraka tamin'ny taona 2014.
Tohina tamin'izany fisamborana sy fanafihana faobe izany ny olona ao amin'ny media sosialy. Na izany aza, maro no manoritra fa tsy mahomby izany paikady fampitahorana izany satria voahetsika tsy misy mpitarika sy tsy manana foibe ny hetsi-panoherana. Mitaratra ny fihetseham-po iraisan'ny olompirenena mpanohana ny demaokrasia ny siokan'i @Lam Ching:
Raha ny amin'ny fisamborambe, ny hany azoko lazaina dia hoe “You can't kill us all” [Tsy afa-mamono anay rehetra ianao]. Tsy maninona na firy na firy no hosamborinareo, mbola hivoaka hatrany aho. Hijery raha manana bala hisamborana vahoaka 2 tapitrisa ianareo.
Ho setrin'ny hetsiky ny polisy, mpanao lalàna maro pan-demaokratika no mamelaka ny fisamborana ho tetika fampitahorana ka nampanantena fa hijoro miaraka amin'ny vahoaka mandritra ny fivorian'ny 31 aogositra.